Olona 59 no maty, maherin'ny 1000 no tsy hita popoka noho ny tondra-drano mahatsiravina nanimba an'i Alemana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Olona 59 no maty, maherin'ny 1000 no tsy hita popoka noho ny tondra-drano mahatsiravina nanimba an'i Alemana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Andro be oram-be nivatravatra dia niteraka tondra-drano lehibe tany Andrefan'i Alemana tamin'ity herinandro ity.
Olona 30 no voalaza fa maty tany amin'ny fanjakan'i Rhine-Westphalia Avaratra.
Olona 29 no maty tany Rhineland-Palatinate.
Tombanana ho 1,300 XNUMX ny olona tsy hita popoka tamin'ny tondra-dranon'ny Alemanina.
Olona 59 farafahakeliny no maty ary 1,000 XNUMX mahery no tsy hita tany Alemana vokatry ny tondra-drano mahatsiravina izay nandrava ny faritra andrefan'ny firenena.
Andro be ny oram-be nivatravatra dia niteraka tondra-drano lehibe tany andrefan'i Alemana tamin'ity herinandro ity, ka nahatratra 59 ny isan'ireo maty.
Rehefa nanao ezaka famonjena lehibe ny polisy, miaramila ary mpiasa fanampiana hafa dia olona 30 no voalaza fa maty tany amin'ny fanjakan'ny North Rhine-Westphalia, raha tra-boina 29 hafa kosa hita tany Rhineland-Palatinate.
Tombanana ho 1,300 1,000 ny olona tsy hita popoka, satria maherin'ny XNUMX ny polisy, mpamono afo, miaramila ary mpiasa vonjy voina hafa no nivezivezy tany Rhineland-Palatinate sy Rhine-Westphalia Avaratra - ireo fanjakana roa voa mafy indrindra - ary koa Baden-Wurttemberg mpifanila vodirindrina aminy. . Helikoptera folo no napetraka nandritra ny ezaka famonjena, miaraka amina fonosana tariby telo hafa vonona hanohy ny fikarohana mandritra ny alina.
Mbola miasa ihany koa ny manampahefana alemanina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny lasantsy, ny herinaratra ary ny rano amin'ireo faritra voakasik'izany, raha mbola miomana amin'ny fananganana toerana fitsaboana rano vonjimaika any amin'ny toerana sasany ny masoivohom-panjakana federaly alemana momba ny fanampiana ara-teknika (THW).
Taorian'ny oram-be, ny tohodrano Steinbachtalsperre akaikin'ny tanànan'i Euskirchen any Rhine-Westphalia Avaratra dia atahorana hiala. Nampitandrina ny manam-pahefana ao an-toerana tao amin'ny lahatsoratra Facebook fa “tsy fahombiazana tampoka… tsy maintsy andrasana amin'ny fotoana rehetra,” na eo aza ny ezaka hitazomana ny rafitr'izy ireo. Trano enina farafahakeliny koa no nirodana, ary 25 hafa atahorana hianjera.
Ny Chancelior Alemanina Angela Merkel, izay mitsidika an'i Etazonia mandritra ny fihaonana amin'ny filoha Joe Biden, dia nilaza fa "loza" ny tondra-drano, ary nanampy ho an'ireo voakasik'izany ny fanampiana.
"Momba anao ny eritreritro, ary afaka matoky ianao fa ny herin'ny governemantanay rehetra - federaly, isam-paritra ary vondrom-piarahamonina - dia hanao ny zava-drehetra ao anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra hanavotana aina, hanamaivanana ireo loza ary hanamaivanana ny alahelo," hoy i Merkel.
Nanolotra fiaraha-miory ho an'ireo niharan-doza koa ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden, tamin'ny filazany fa “loza izany ary miaraka am-pianakaviana namoy havan-tiana ny fonay.”
Tsy i Alemana irery no nenjehin'ny toetr'andro ratsy. Tonga tany Belzika, Luxembourg ary Netherlands koa ny tondra-drano. Sivy no voalaza fa novonoina tany Belzika, raha ny filazan'ny masoivohom-baovao Belga, raha nanentana mponina an'arivony kosa ny manampahefana holandey handositra ireo faritra tratry ny tondra-drano.